I-Qatar Airways isungule iinqwelomoya ezintathu ngeveki eziya e-Abuja, eNigeria | Iindaba zeenqwelo moya
Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » I-Qatar Airways iphehlelela iinqwelomoya ezintathu ngeveki eziya e-Abuja, eNigeria
I-Qatar Airways iphehlelela iinqwelomoya ezintathu ngeveki eziya e-Abuja, eNigeria
Qatar Airways ibhengeze ukuba izakusebenzisa iinqwelomoya ezintathu ngeveki ukuya e-Abuja, eNigeria zidlula eLagos ukusuka nge-27 kaNovemba 2020 iyindawo yesithandathu entsha ebhengezwe ngumphathi welizwe lase-Qatar okoko kwaqala ubhubhane. Inkonzo ye-Abuja iza kuqhutywa yinkampani yenqwelomoya ye-Boeing 787 Dreamliner enezihlalo ezingama-22 kwiBusiness Class kunye nezihlalo ezingama-232 kwiKlasi yezoQoqosho.
UMlawuli oyiNtloko weQatar Airways Group, oHloniphekileyo uMnu. Akbar Al Baker, uthe: “Siyavuya ukwazisa ngeenqwelomoya kwiinkunzi zaseNigeria. Ngenxa yokufudukela kwabantu baseNigeria abomeleleyo eYurophu, e-US nase-UK, kuyasivuyisa ukuba ngoku sihamba ngenqwelo-moya eya e-Abuja ngaphezu kweenqwelo-moya zethu zaseLagos esele zikho ezaqala ngo-2007. Sijonge ukusebenza ngokusondeleyo namaqabane ethu eNigeria ukuze sikhule ngokuzinzileyo oku. indlela kunye nenkxaso yokufumana kwakhona ukhenketho kunye norhwebo kulo mmandla. ”
Ngeenqwelo moya ukuya kwiindawo ezingaphezu kwama-85 eAsia-Pacific, Yurophu, Middle East nakuMntla Melika, abakhweli abafuna ukuya okanye abasuka eNigeria ngoku banokonwabela ukudityaniswa ngokungenamthungo ngeSikhululo seenqwelomoya esiPhambili kuMbindi Mpuma, Isikhululo senqwelomoya saseHamad Phakathi kuDisemba, iQatar Airways izakusebenza ngaphezulu kweenqwelomoya ezingama-65 ngeeveki ukuya kwiindawo ezingama-20 eAfrika, kubandakanya iAccra, Addis Ababa, eKapa, ​​Casablanca, Dar es Salaam, Djibouti, Durban, Entebbe, Johannesburg, Kigali, Kilimanjaro, Lagos, Luanda, IMaputo, iMogadishu, iNairobi, iSeychelles, iTunis neZanzibar.
Ngokuhambelana nokwandiswa kweenqwelo moya e-Afrika iphela, abakhweli banokukhangela phambili ekwamkeleni iindwendwe zase-Afrika ebhodini kunye neqela labaphethe iinkcubeko ezahlukeneyo kubandakanya ngaphezulu kwamazwe angama-30 aseAfrika. Ukongeza, abakhweli kwinethiwekhi yethu banokonwabela iintlobo ngeentlobo zemiboniso bhanyabhanya yaseAfrika, iinkqubo zeTV kunye nomculo kwiOryx One, inkqubo yeQatar Airways 'yokubhabha ngenqwelomoya.
Utyalomali olucwangcisiweyo lweQatar Airways ngeendlela ezahlukeneyo ezonga amafutha, iinjini ezinamawele, kubandakanya neyona nqwelo moya inkulu yeAirbus A350, iyenze yakwazi ukuqhubeka nokubhabha kuyo yonke le ngxaki kwaye iyibeka kwindawo efanelekileyo ukuze ikhokelele ekubuyiseni okuzinzileyo kohambo lwamanye amazwe. I-airline kutshanje ithathe ukuhanjiswa kweenqwelomoya ezintathu ezintsha zeAirbus A350-1000, inyusa iinqwelo zayo zizonke ezingama-A350 ukuya kuma-52 kunye neminyaka yobudala eyi-2.6. Ngenxa yefuthe le-COVID-19 kwiimfuno zohambo, i-airline ibeke inqwelomoya yayo yeAirbus A380s njengoko kungenakulungeleka kokusingqongileyo ukusebenzisa inqwelomoya enkulu eneenjini ezine kwintengiso yangoku. I-Qatar Airways isandula ukwazisa ngenkqubo entsha eyenza abakhweli ngokuzithandela ukuba basuse ukukhutshwa kwekhabhoni okunxulunyaniswa nohambo lwabo kwinqanaba lokubhukisha.
Inqwelomoya eyaphumelela amabhaso, iQatar Airways yabizwa ngokuba 'yeyona nkampani yeenqwelomoya ibalaseleyo kwihlabathi' ngamawonga eeNqwelo moya e2019, alawulwa yiSkytrax. Ikwabizwa ngokuba 'yiNqwelomoya ehamba phambili eMbindi Mpuma', 'Elona Klasi liShishini liBalaseleyo', kunye 'nesihlalo esiPhambili seShishini', ekuqwalaseleni amava ayo oQeqeshiso lweShishini, iQsuite. Ubume besihlalo seQsuite luqwalaselo lwe-1-2-1, ebonelela abagibeli ngeyona ndawo iphangaleleyo, yabucala ngokupheleleyo, ekhululekile kunye nentengiso ekumgangatho ophakathi weShishini. Yiyo kuphela inqwelo moya eyathi yanikwa iwonga elinqwenelekayo 'iSkytrax Airline yoNyaka', neyaziwa njengeyona ndawo iphambili kushishino lwenqwelomoya, amatyeli amahlanu. I-HIA ibisandula ukubekwa kwindawo yesithathu kwisikhululo seenqwelomoya, phakathi kwezikhululo zeenqwelo moya ezingama-550 kwihlabathi liphela, yiAtttrax World Airport Awards 2020.
Abahambi beQatar Airways abasuka eAfrika ngoku banokonwabela izibonelelo zempahla emitsha ezisuka kwi-46 Kg yoHlelo lwezoQoqosho zahlulwe iziqwenga ezibini kunye ne-64 Kg yahlula iziqwenga ezibini kwiBanga loShishino. Eli nyathelo lenzelwe ukunika abakhweli ubhetyebhetye ngakumbi kunye nentuthuzelo xa behamba ngebhodi yeQatar Airways.
Ishedyuli yokubhabha e-Abuja: NgoLwesithathu, ngoLwesihlanu nangeCawa
IDoha (DOH) ukuya e-Abuja (ABV) QR1419 ihamba: 01:10 ifika: 11:35
Kuhamba i-Abuja (ABV) ukuya eDoha (DOH) QR1420: 16: 20 ifika: 05: 35 +1